19 tabs oo looga fal-celinayo Naqshadeynta Maaddada illaa mid fudud oo dareen leh | Abuurista khadka tooska ah
19 Ka fal celi tabyada noocyadeeda kala duwan ee jadwalka iyo wixii ka badan
Horeba waqtiga waxaan wadaagnaa taxane jadwal ah qaybaha webkaas taas oo aan dooneyno inaan duubo dhacdooyin taxane ah. Hadda waa 19 tabs oo isku hadaf ahIn kasta oo loo yaqaan 'React' si aad u hesho mid kaamil ah oo qeexaya dhacdooyinka jadwal ama taariikhda shirkaddaada oo leh qoraal la xiriira.
Uruurintan 19 React tabs ayaa jira labadaba jiif iyo toosan oo dhammaantoodna waa gebi ahaanba bilaash. Marka waad heli kartaa sidaad rabto. Taxane taxane ah oo daboolaya dhammaan noocyada baahiyaha si loo raaco istaandarka hadda jira ee naqshadeynta websaydhka sannadkan 2018. Aynu ku sameyno 19 tabo falcelin ah oo aan cidna uga hari doonin.
1 Ka fal celi Taabashada Yaryar
2 Falcelinta tab -yarada re -re
3 Ka fal-celi tabka websaydhka
4 Ka fal celi tabsyada jawaabta leh
5 Ka fal celi tabs la heli karo
6 Waxyaabaha tabs
7 Ka fal celi tabs
8 Ka fal celi TabTab
9 Ka fal celi Aria Tabpanel
10 Ka fal celi Tabbordion
11 Tabs dhaqso leh
12 Ka fal celi aragtiyada isdhaafsiga
14 Ka fal celi tabs
16 Ka fal celi Taabashada Waxyaabaha Dhaladka ah
17 Ka fal celi Muuqaalka Tabta Dhaladka ah
18 Ka falgal badmaax tabbar dhalad ah
19 Ka fal celi Tabsadaha Dhaladka ah
Ka fal celi Taabashada Yaryar
Qaybta tab ee Falcelinta leh fursadaha aasaasiga ah si loo astaysto mawduuca. Laga soo bilaabo bogga tusaalaha waxaad ka arki kartaa habka kala-duwanaanta kala duwan ee keena tab aasaasi ah oo leh qaab yar oo u gaar ah.
Falcelinta tab -yarada re -re
Laga soo bilaabo codesandbox waad awoodaa u soo gal shaashadda tabkan fal-celin taas ayaa lagu kala soocayaa iyadoo la awoodo in markale la isticmaalo. Sida ka muuqata tusaalaha, waa tabs aasaasi ah oo leh macluumaadka aan dooneyno inaan ku siino degelkeena. Waxaad ku haysaa dhammaan macluumaadka khuseeya demo.
Ka fal-celi tabka websaydhka
Iyada oo leh taban loogu talagalay 'React' waan awoodnaa dooro qaabeynta jiifka ama mid kale oo taagan. Waxaa lagu kala soocaa iyadoo la qaabeynayo oo la heli karo tabs qaar ka mid ah oo aad ka arki karto tusaalayaashooda si loo isticmaalo iyaga sida kugu habboon boggaaga.
Ka fal celi tabsyada jawaabta leh
Tababyada jawaabta ee falcelinta oo lagu kala sooco inay ahaadaan loogu talagalay mobilada. Bogga tusaalaha waxaad ka heli kartaa xulashooyin kala duwan si aad u eegto mid kasta oo ka mid ah habeynta ay tabyadani siinayaan React
Ma seegin kaaga Github.
Ka fal celi tabs la heli karo
Qeyb loo heli karo tabs for React. Aad ufudud dhamaan nuxurkeeda sadex qaybood oo lagu muujiyay tusaalaha la siiyay si aad fikrad uga heli karto tabsadan falcelinta.
Halkan ma lihin bog demo ah si aan u aragno tabkaan loogu talagalay 'React in situ', laakiin waxaad aadi kartaa websaydhka github si aad u haysato dhammaan koodhka gacantaada. Waa xirmo React ah oo bixisa qayb ka mid ah tabs ah Naqshadeynta Qalabka, luqadda naqshadeynta ka socda Google oo inala joogey dhowr sano hadda. Halkan waxaad ka heli kartaa qalabka la daabacay by Google si ay u adeegsato Qalabka Naqshadeynta.
Ka fal celi tabs
React tabs navigation waa qayb tayo tayo leh oo kuu oggolaanaysa adiga ogolaanaya daalacashada iyada oo tabs ku jirta barnaamijkaaga shabakadda. Isla iskuxirka bogga tusaalaha waxaad ka heli kartaa Github si aad markhaati uga dhigto inta hartay ee nambarka.
Ka fal celi TabTab
Ka fal celi Aria Tabpanel
Kuu ogolaanayaa inaad la falgalaan tabs ah la ah furayaasha fureyaasha kumbuyuutarka loogu talagalay qayb ka mid ah 'React' aad u jilicsan oo u oggolaanaysa habeyn weyn. Waxaad ku haysaa tusaalooyin kala duwan boggeeda demo.
Ka fal celi Tabbordion
Qeyb kale oo loogu talagalay 'React' oo leh dhammaan noocyada xulashooyinka qaabeynta sida cinwaanka bakhaarka. Universal iyo semantic waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku sameysid heshiisyo iyo tab bogaggaaga. Faahfaahin kama dhinna dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah hirgelintiisa.
Tabs dhaqso leh
Qeyb tab ah oo loogu talagalay 'React' oo isticmaasha iyada dabacsanaanta iyo macnaheeda durugsan. Kufiican sameynta tabs fudud oo marin loo helo. Dhammaan macluumaadka, iyo sidoo kale iskuxiraha keydka Github waxaa laga heli karaa bogga tusaalaha ah ee la bixiyay.
Ka fal celi aragtiyada isdhaafsiga
Qeyb ka mid ah 'React' oo loogu talagalay tabsyada ku duugan iyo aragtiyaha noqon kara ku muuji dhaqdhaqaaqyada. Ku habboon goob loogu talagalay moobiilka. Waxaad ku haysaa tusaalooyin xulashooyinka kala duwan bogga tusaalaha ah si aadan u seegin faahfaahinta qaybtan falcelinta.
Qeyb ka mid ah 'React tabs' oo tusaale ahaan ka socota websaydhkeeda waxaad ku leedahay waxyaabo kala duwan ikhtiyaarrada la siiyay si loo habeeyo. Dhamaan macluumaadka si habsami leh ayaa loo abaabulay si aad si fudud ugu fulin karto qaybtaan.
Tabs hooyo oo loogu talagalay falcelinta labadaba webka asal ahaan. Waxaad ku haysaa tusaalooyin dhowr ah bogga la siiyay si aad u aragto sida qaybtani u dhaqanto. Geeska kore ee midig waxaad kuleedahay iskuxirka bakhaarka Github hadii aad rabto inaad waxbadan ogaato ama aad uqaadatid websaydhkaaga.
Ka fal celi Taabashada Waxyaabaha Dhaladka ah
Sida magaceeda ka muuqata, waa loogu talagalay Qalabka Naqshadeynta hirgelinta tab. Ma lihin bog tusaale ah, laakiin waxaan haysannaa bakhaar Github ah oo aad ka heli karto wax kasta oo looga baahan yahay is-dhexgalkeeda.
Ka fal celi Muuqaalka Tabta Dhaladka ah
Ka falgal badmaax tabbar dhalad ah
Qayb ka mid ah tab-ficillada 'react tabs' oo abuura a biraawsar wanaagsan oo lagu daray bar baarkooda.
Ka fal celi Tabsadaha Dhaladka ah
Ka fal celi tabta Dhaladka oo ah madal kaligeed istaagi karta waxaa loo isticmaali doonaa jeedal hoose iyo waliba aragtiyaha qaybta. Tan waxaan ku dhamaynaynaa taxanaha tabta ee falcelinta. Waxaan kaaga tagi doonnaa foomam taxane ah CSS markaa waad isha ku hayn kartaa oo fiiri kartaa inay u wanaagsan yihiin websaydhkaaga.
Sida loo doorto laptop-ka qaabeynta garaafka
Sawirada cajiibka ah ee cirka ee macbadyada Buddhist ee Burma